Ebee ka ilebara anya na ahia B2B gi | Martech Zone
Ebee ka ileba anya na ahia B2B gi
Monday, August 29, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Jenn Lisak Golding
Econsultancy ka weputara akuko nke August 2011 nke B2B Internet Statistics, na akowa ihe kachasi di anya na ahia na intaneti, e-commerce, Intanet, na mgbasa ozi dijitalụ yiri ya. Ọ bụ ezie na akụkọ ahụ na-enye ọtụtụ nnukwu nchọta, ebe a bụ ụfọdụ ọnụọgụ na-atọ ụtọ nke gbasiri ike:
Ihe omume ụlọ ọrụ na ndị ahịa na-adị oke egwu maka ndị na-ere ahịa B2B. Na 2010, 85% nke ndị ahịa na-etinye ego na ahịa ihe omume, na 28% nke otu ahụ na-eme atụmatụ ịbawanye itinye ego ndị ahụ na 2011. Ọ bụrụ na e nyere ha mmefu ego, ndị na-ere ahịa bụ ọnụọgụ ọnụọgụ nke ndị ahịa ga-etinye.
Digital Media bụ 8 nke ụzọ kachasị dị irè dị iri na asatọ iji ruo ndị na-ege ntị B10B.
63% nke ndị ahịa B2B mara nke ahụ atumatu omenala nwere mmetuta siri ike na ọrụ ntanetị n'ịntanetị maka usoro ọchụchọ, azụmahịa weebụ, na ntụgharị n'ịntanetị.
Ná nkezi, ndị na-ere ahịa na-etinye 38% nke mmefu ego ha niile na mmata aha, 34% na ọgbọ mbu, na 28% na njide ndị ahịa. N'ụzọ dị iche, 28% nke mmefu ego nke ntaneti raara onwe ha nye mmata na ọdịiche e kenyere n'etiti ọgbọ ndu na njide ndị ahịa.
Ihe kariri ọkara (55%) nke ụlọ ọrụ B2B nyochara nwere ngalaba nke isi na-elekwasị anya bụ na njigide ndị ahịa na iguzosi ike n'ihe. 94% nke ụlọ ọrụ ndị a na-akọ na enwere nkwado dị elu maka ịmepụta ngalaba dị otú a. Ihe kariri otu ụzọ n'ụzọ atọ (36%) nke ndị zaghachiri gosiri na ngalaba ha na-akọpụrụ onye isi ọrụ ozugbo; 21% kọọrọ Sr. VP / VP nke Marketing na 15% kọọrọ Sr. VP / VP nke Sales
Ọ bụrụ na ị na-emeso ndị ahịa B2B bụ isi, ana m akwado gị ka ị wepụta oge wee nọdụ ala ma gụọ akụkọ a, nke na-ekwu banyere akụkụ niile nke ụlọ ọrụ ahịa n'ịntanetị.
Thezọ kachasị ọsọ na kachasị mfe nke ịgbanye saịtị gị